KDE iphucula ulwazi lomsebenzisi kwizixhobo zokubamba | ubunlog
I-KDE yenza uphuculo oluninzi kumava omsebenzisi kwizixhobo zokuchukumisa, kunye nezinye iindaba kule veki
IPablinux | 02/04/2022 11:27 | KDE, Ubuntu
Sele kulithuba iMicrosoft yakhupha ifayile uMphezulu wokuqala. Yenze oko ukukhuphisana ne-iPad, ngelo xesha yayiyeyona thebhulethi isetyenziswa kakhulu emhlabeni, kwaye into ababecinga ukuba yayikukwenza ilaptop yesikrini sokucofa. Ngokucacileyo kwaye ufunde kwiindaba ezininzi, bekukude ekusebenzeni ngokugqibeleleyo, kodwa ndicinga ukuba umbono ulungile. Kwaye, ngokucacileyo, ukuba KDE naye akayithandi.
Kwaye hayi, asikuko ukuba i KDE iye yaphambana kwaye icinga ngokusekwe kwi Windows okanye nantoni na elolo hlobo. Yiyiphi benza inkqubela kwimo yethebhulethi yabo. Ukubaleka kuphela kwi-Wayland, xa usebenzisa i-KDE/Plasma kwi-convertible, ukususa ibhodi yezitshixo okanye ukuyibeka kwimowudi yethebhulethi kuyakutshintsha ngokuzenzekelayo inkqubo yokusebenza kuloo ndlela, kwaye yonke into iya kuba lula ukuyichukumisa, kwinto ebizwa ngesiNgesi njenge “ touch friendly”. Yinto yokuqala abahlomle ngayo inqaku yale Veki kwi KDE.
1 Iimpazamo zemizuzu eli-15 zisonjululwe
Iimpazamo zemizuzu eli-15 zisonjululwe
Inani lihleli kuma-76, ekubeni besombulule isibini kwaye bafumanisa ezinye ezimbini (uluhlu olupheleleyo):
I-popup yefolda enokuthi ivulwe ukubonisa imixholo yeefolda kwi-desktop ayisekho ngokucaphukisayo ipixels ezimbini ezimxinwa kakhulu ukubonisa iseli yegridi eyongezelelweyo (Nate Graham, Plasma 5.24.5).
Xa usebenzisa i-Plasma Vault ene-backend ye-GoCryptFS, ukuvula iVault ngoku kubangela ukuba ibonakale kwindawo yolawulo yeNdawo, njengabanye abasebenzisa i-CryFS kunye nee-backends ze-EncFS (Ivan Čukić, i-Frameworks 5.93).
Ininzi inkqubela eyenziweyo kwimowudi yethebhulethi, apho uNate Graham ayichazayo:
Luphawu lweseshini yePlasma Wayland apho yonke into iba yinto ebambekayo. Ukuba unelaptop eguquguqukayo, ivulwa ngokucofa isikrini umva ukuze usijike sibe – qikelela ukuba yintoni – ithebhulethi. Kodwa iya kuphinda isebenze kwiifowuni kunye nezinye izixhobo zokuthintela ezingabonisiyo, njenge-Steam Deck, okoko nje kungekho mouse iqhagamshelweyo (kuphela nje ukuba usebenzise iseshoni ye-Wayland, kunjalo).
I-KWrite ngoku ngaphakathi isebenzisa i-codebase efanayo ne-Kate, kodwa ivala nje iqela leempawu zomdwelisi wenkqubo. Oku kuyenza ihambelane kakhulu ne Kate, kulula ukuyigcina, kwaye iya kuba neebugs ezimbalwa. Kwaye ngoku ineethebhu (Christoph Cullmann, KWrite 22.08).
Umfanekiso weMini yamaphephadonga ngoku ikuvumela ukuba ujonge umfanekiso kwaye ujonge imethadatha yomfanekiso kwifestile yezicwangciso. (Fushan Wen, iPlasma 5.25).
Ngoku, xa ufaka imowudi yethebhulethi, zonke izinto ezisebenzisanayo ze-UI (kubandakanywa namaqhosha ebar yesihloko) eziyilwe ngomxholo weBreeze ziba nkulu kwaye kulula ukuzibamba (Marco Martin kunye noArjen Hiemstra, iPlasma 5.25).
Ngoku ungakwazi ukunyenyisa isithuba phakathi kwee-icon kuMphathi woMsebenzi kwii-icon kuphela, kwaye xa ukwiMowudi yeThebhulethi, izithuba zilungelelanisa ngokuzenzekelayo ukuya kwelona nqanaba liphezulu lokuphucula ukuchukumiseka, kanye njengokuba sisenza kwii-icon zeTreyi zeSistim (Tanbir Jishan noNate Graham).
Kwiseshini yePlasma X11, onke amaqhosha akwiWacom ExpressKey Remote izixhobo ngoku angaqwalaselwa (Umntu ohamba ngegama elingelolakhonkwane elithi "oioi 555", wacomtablet 3.3.0).
Xa i-Discover ifakela uhlaziyo lweepakethe ezinolwakhiwo oluninzi olukhoyo (umzekelo, i-32-bit kunye ne-64-bit yeenguqulelo, ngenxa yokufakwa kwe-Steam), ngoku ifakela uhlaziyo lwazo zonke izakhiwo endaweni yeseti yazo engacwangciswanga. kubangela imiba OS (Alessandro Astone, Plasma 5.25, kodwa backport ukuba 5.24.5 kunokwenzeka).
i-kio-fuse ngoku isebenza ngaphakathi kwevula/ukugcina iingxoxo zebhokisi yesanti izicelo, nto leyo ethetha ukuba ngoku unokusebenzisa ezo zicelo ukuvula nokugcina iifayile kwizabelo zeSamba kunye nezinye iindawo zenethiwekhi, umzekelo (Harald Sitter, plasma 5.25).
Ukufumanisa ngoku kubonisa inkcazo kunye nolwazi lwelayisenisi kwiipakethe zendawo (Fushan Wen, Plasma 5.25).
I-Discover ngoku ibonisa igama lombhali elichanekileyo lepakethe ngaphandle kweseti yombhali ethile ehlala kwiqela leprojekthi. Ukwenza, oku kuthetha ukuba iphuli yesicelo se KDE ngoku izakudwelisa "KDE" njengombhali (Nicolas Fella, Plasma 5.25).
Ifoto ye-Bing ye-plugin yephepha lodonga ngoku iya kukhuphela iinguqulelo ze-4K zemifanekiso ukuba unesisombululo sesikrini esingaphezulu kwe-1080p (i-Fushan Wen kunye ne-Yunhe Guo, i-Plasma 5.25).
Iiheader zewijethi zePlasma ziphinda zivele njengoko kulindelekile xa usebenzisa "iBreeze Light" okanye "Breeze Dark" imixholo yePlasma enekhowudi yombala, endaweni yomxholo wePlasma othi "Breeze" ohlonipha isikimu sombala esingagqibekanga isicelo (Martin Framework, Frameworks 5.93).
Izinto zoluhlu olunokurhuqeka kwizicelo ezisekwe kwiKirigami ngoku zihamba kakuhle kakhulu, ngaphandle kokuxhuzula okanye ukuqhwanyaza (Tranter Madi, Frameworks 5.93).
Xa usebenzisa iipropati zemboniselo yencwadi kwiDolphin, iindawo ezininzi ngoku zisebenzisa isicwangciso semboniselo esiyelelene ngakumbi: umzekelo, uluhlu lwemboniselo yophendlo lubandakanya umqolo obonisa indawo eyiyo yazo zonke iimatshisi; imboniselo yenkunkuma inoluhlu oluneekholamu ezibonisa "indawo yokuqala" kunye "nexesha lokucima"; "Iifayile zakutsha nje" kunye "neNdawo zakutsha nje" zikhangela izinto zeqela ngemini; njl. (Kai Uwe Broulik, Dolphin 22.04).
Ii Tabs kwi Kate kunye ne KWrite azisadluli kububanzi obugcweleyo befestile ngokungagqibekanga, kwaye ibar yesithuba egcweleyo ngoku ibonakala kuphela emva kokuvula uxwebhu lwesibini, njengakwezinye izicelo ezitshisiweyo ze KDE (Christoph Cullmann, Kate & KWrite 22.08).
I-Filelight ngoku inesenzo "sokuhamba kwi-overview" eya kukubuyisela kwiphepha eliphambili (iHarald Sitter, iFayilelight 22.08).
Kwisiphumo sokujonga, iwindow ngoku inokuswayipha ezantsi ukuyivala, kwaye amaqhosha okuvala efestile ngoku ahlala ebonakala endaweni yokuvela kuphela kwimouseover (Marco Martin, Plasma 5.25).
Izaziso zenkqubela phambili yomsebenzi ngoku zibonisa ixabiso lepesenti ecaleni kwebha yenkqubela phambili kwabo bakhetha ukufunda okubhaliweyo ngaphezu kwezinto ezibonakalayo (uJan Blackquill, iPlasma 5.25).
Iwijethi yokwahlula umda ngoku incinci kakhulu, kodwa iba nkulu kwaye ibonakale ngokucacileyo kwindlela yokuhlela (Tanbir Jishan, Plasma 5.25).
Iwijethi ye-Audio Volume ayisabonisi izixhobo ezibonakalayo ngokungagqibekanga, nangona ungazibuyisela umva ukuba uyazisebenzisa ngokwenene (Arjen Hiemstra, Plasma 5.25).
Iphepha le-System Abasebenzisi abaKhethayo alisabonisi dilesi ye-imeyile kwindawo ethi "Idilesi ye-imeyile", kuba yi-2022 kwaye abantu ngokubanzi bayazi ukuba yintoni idilesi ye-imeyile kunye nendlela eyakhiwe ngayo (uDavid Edmundson, i-plasma 5.25).
Ulusu lwewijethi yomdlali wemidiya ngoku iwela ngokutyibilikayo xa itshintsha, endaweni yokudanyaza ngequbuliso (Fushan Wen, Plasma 5.25).
Zonke iiwijethi zePlasma ezibonisa imiyalezo yesibambi-ndawo xa ingenanto ngoku ikwabonisa ii-icon ukongeza kumbhalo (Fushan Wen noNate Graham, Plasma 5.25).
Iphepha leZilungiso zeDisplay of System Preferences ngoku linokuthi kanye kanye ukuba kuseto ntoni isiboniso kwi “Primary” (Nate Graham, Plasma 5.25).
Iphepha "Yintoni umngcipheko wesoftware yobunini?" I-Discover ngoku ivula ngokucofa iqhosha eliqhelekileyo, kunekhonkco elinokukwenza ucinge ukuba uvula isikhangeli sewebhu (Nate Graham, Plasma 5.25).
Xa usenza ifayile entsha kwiDolphin, idesktop, okanye nayiphi na enye into esebenzisa umgangatho "ukudala ifayile entsha" ukusebenza, inxalenye ekhethiweyo yegama lefayile ayisabandakanyi ukongezwa (Fushan Wen, Frameworks 5.93).
IPlasma 5.24.5 iza kufika ngoMeyi 3, kunye ne-Frameworks 93 ziya kufumaneka ukususela nge-9 ka-Aprili. IPlasma 5.25 iya kufika kwangoko nge-14 kaJuni, kwaye i-KDE Gear 22.04 iya kuhlala kunye nezinto ezintsha nge-21 ka-Epreli. I-KDE Gear 22.08 ayikabinawo umhla osemthethweni omiselweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Iidesika » KDE » I-KDE yenza uphuculo oluninzi kumava omsebenzisi kwizixhobo zokuchukumisa, kunye nezinye iindaba kule veki
I-GNOME isixelela ngeendaba ezininzi, ezaneleyo ukuba zibhale ukungena veki nganye ngokuthi "Inzulu kakhulu"
Ubuntu 22.04 iJammy Jellyfish isungula inguqulelo yayo ye-beta